Qaar kamid ah Xildhibaanada Gaalkacyo oo is Casilaya sabab? (dhegayso) – Radio Daljir
Qaar kamid ah Xildhibaanada Gaalkacyo oo is Casilaya sabab? (dhegayso)
Janaayo 16, 2018 2:04 g 0
Qaarka tirasan Xildhibaanada Golaha Degaanka Gaalkaco ayaa sheegay in ay iscasiyaan Hadii aysan dowlada dhexe iyo wasaarada arrimaha Guddaha waxkaqaban maamul xumo ay shegeen in ay ka jirto dowlada Hoose degamada Galkayo.
Xildhibanadan oo Daljir la hadlay ayaa sheegay inaysan u dul qaadan doonin maamul xumada baahday ee kajirta magaaladda Gaalkacyo ee Xarunta gobalka Mudug.
Boosaaso laga daah-furay shirkad soo saarta kuraasta Balastika ah (dhegayso)